Sida TV looga dhigo goob dabka lagu shito (video iyo application) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ma jiraan wax la mid ah raaxada raaxada leh ee dab guuxaya, laakiin qof walbaa si fudud uguma raaxaysan karo. Gaar ahaan magaalooyinka, dabka guriga ka jira ma aha wax caadi ah, xitaa kuwa lehna waxaa laga yaabaa inaysan haysan waqti ama suurtagal ay ku diyaariyaan xaabada. Sikastaba xaalku ha ahaadee waa macquul u ekeysii joogitaanka guriga dabka ee guriga iyo in la abuuro jawi dabka "dalwaddii ah" oo noqda mid ku habboon oo keliya nasashada habeenkii, laakiin sidoo kale inta lagu jiro casho lala yeesho asxaabta ama qoyska, sidaad u jeclaan lahayd Kirismaska ​​ama habeennada kale ee xilliga qaboobaha.
Waxaad awoodi kartaa u beddel TV-gaaga meel dusha laga shito, bilaash, dhowr siyaabood oo runtii fudud oo wax ku ool ah, kuwaas oo horseeda u arag dabka dilaacaya toogashada qeexitaan sare, oo dhameystiran dhawaaqyada qoryaha gubanaya.
AKHRISO: Waraaqaha ugu quruxda badan ee jiilaalka ee loogu talagalay PC leh baraf iyo baraf
Waxaan ku socdaa Netflix
Habka ugu horeeya ee TV-gaaga looga dhigo goob dabka lagu rido, iyo waliba tan ugu fudud, waa in lagu ciyaaro fiidiyowga dabka gubanaya. Tan waxaa lagu samayn karaa YouTube ama, si ka sii fiican, Netflix. Layaab yaab leh wadada O Guriga on Netflix, waxaad ka heli kartaa runtii saacado badan oo fiidiyow ah oo sifiican loo qabtay.
Gaar ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa fiidiyowyada soo socda Netflix:
Habka caadiga ah ee dabka ee guriga
Dildilaaca Guriga Dildilaaca (Birch)
Waxaan ku socdaa Youtube-kaaga
Barta Youtube-ka waxaad ka heli kartaa wax walba mana yaraato fiidiyowyo dhaadheer oo aad TV-ga ka dhex arki karto dab ololaya oo guuxaya. Kanaalka "Fireplace for your home" wuxuu leeyahay noocyo gaagaaban oo ah fiidiyowyada Netflix, halka aad ka raadineyso Camino ama "Fireplace" barta YouTube-ka waxaad ka heli kartaa fiidiyowyo soconaya 8 saacadood ama ka badan oo joogto ah oo aad toos uga bilaabi karto halkan:
4K waqtiga dhabta ah ee dabka 3 saac
Meel dabka ah 10 saacadood
Goobta dabka kirismaska ​​goobta 6 macdanta
Goobta Kirismaska ​​8 macdanta
AKHRISO: Sida loo daawado fiidiyowyada YouTube-ka ee TV-gaaga
Codsi lagu daawan karo dabka TV-ga Smart TV
Waxay kuxirantahay nooca Smart TV ee aad isticmaaleysid, waxaad ku rakibi kartaa codsi bilaash ah adoo ka raadinaya erayga Fireplace App Store-keeda. Kuwa ugu wanaagsan ee aan helay, waxaan tilmaami karnaa:
Qalabka dabka ee iPad ama Apple TV
Meesha ugu horreysa ee dabka lagu shito
Dabka cajiibka ah
Codsiga loogu talagalay Android TV / Google TV Fireplace
Olol - 4K Foornada Foornada
HD foornada dalwaddii
Meelaha dabka lagu shido ee jaceylka ah
Barnaamijka Fire Fire Amazon Fire TV
Foornada qoryaha cad
HD IAP dabka dalwaddii
Qalabka dabka Chromecast
Qalabka Chromecast (oo aan ahayn Google TV), ma hayaan codsiyo lagu daawan karo goobta dabka lagu shito, iyo ikhtiyaarka ah in dab lagu xiro shaashadda dabka sidoo kale waa la waayey (waxaa laga heli karaa Google Music). Si kastaba ha noqotee, waxaad ka raadin kartaa Bakhaarka barnaamijyada tuuri kara fiidiyowga dabka gubanaya ee Chromecast ee casriga ah ee Android (sida Fireplace for Chromecast TV) ama iPhone (sida Fireplace for Chromecast). Waxa kale oo aad sii deyn kartaa fiidiyow kasta oo Youtube ah adoo isticmaalaya casrigaaga ama kombiyuutarkaaga Chromecast.
6 barnaamijyo si loo abuuro a flash bootable bootable for Windows, Linux iyo macOS
Sida loo isticmaalo kamaradda iPhone: talooyin waxtar leh iyo shaqooyin
IPhone 12 moodooyinka iyo noocyada